1.Waxaa loo adeegsaday tijaabada falcelinta kordhinta saamiga muunad yar, waxaa loo isticmaali karaa hal ama safar. Tuubooyinka PCR-KA WAKHTIGA waxaa laga sameeyaa UPS heer caafimaad Polypropylene. Dhammaan tuubooyinku waxay la jaan qaadayaan saxanka caadiga ah ee 96 saxan. Naqshadaynta gidaarka-khafiifka ah si kuleylka si wanaagsan looga dhigo. Koofiyad adag oo daboolan ayaa ka hortageysa uumiga uumiga. Tubooyinka ayaa laga heli karaa awoodo kala duwan oo loogu talagalay keydinta muunad kala duwan.
0.1 ml, 0.2 ml, hal iyo 8 xarig, midabbo hufan iyo caddaan ah, daboollo fidsan iyo koofiyad dameed ayaa noqon kara xulashooyin. 0.1 ml tuubooyin ayaa lagu heli karaa caddaan cad oo loogu talagalay calaamadaha sii kordhaya ee tijaabooyinka indhaha. Tuulada PCR waa alaab ku habboon PCR dhaqsaha iyo falcelinta mugga hooseeya. Dhammaan tuubooyinku waa kuwo aan lahayn DNase, RNase-la'aan, aan-pyrogenic ahayn.
2. Nidaamka xakamaynta PCR Octet
Tayada badeecadu waa mid aan laga sooci karin habka wax soo saarka. Tikniyoolajiyadda wax soosaarka ee horumarsan iyo qalabka saxda ah ee saxa waa saadaasha tayada wax soo saarka. Tijaabada PCR waxay fiiro gaar ah siineysaa dhumucda darbiga walxaha PCR, iyo midab khafiif ah oo isku mid ah dhumucdiisuna waxay u baahan tahay hubinta habka kululaynta. Kuleylka ayaa si isku mid ah loogu wareejiyay shay-baarka ku jira PCR octuplets si loo gaaro saxsanaanta natiijooyinka tijaabada ah.
3, qalloocan nuurka,
Iyada oo ay ugu wacan tahay dabeecadda qalabka ugu waxtarka badan PCR, dariiqa nalka ayaa loo baahan yahay in laga sameeyo dusha sare ee waxyaabaha la isticmaali karo ilaa gudaha tuubada, sidaas darteed daahfurnaanta nusqaanta ee waxyaabaha la isticmaali karo ayaa si gaar ah u sarreysa.
Waxqabadka xiritaanka daboolka tuubbada iyo jirka tuubbada wuxuu u baahan yahay inuu si gaar ah u fiicnaado si looga hortago uumiga uumiga tuubada, looga fogaado faddarada iskutallaabta, iyo in la hubiyo saxnaanta natiijooyinka tijaabada ah!
5. Deegaanka wax soo saarka
Qalab wanaagsan, aqoon-isweydaarsi nadiif ah ayaa sidoo kale aad muhiim u ah. Haddii muunada wasakhaysay walxo wasakh leh, natiijooyinka waxay noqon doonaan kuwo aad u khaldan. Sababta baaritaanka waa mid waqti badan qaadata oo xoog badan. Xakamaynta tayada wax soo saarka adag waxay hubin kartaa waxqabadka qayb kasta oo alaab ah. Xasilloon si loo hubiyo saxnaanta iyo soo noqoshada xogta tijaabada ah
1.Slection of hufnaan sare polypropylene wax laga keeno, roob la'aan.
2.Nolo DNA ama RNA majiraan.
3. Darbiga tuubbada lebiska ah ee khafiifka-khafiifka ah waxaa lagu xaqiiqsaday naqshadeynta caaryada. Darbiga tuubbada lebiska ah ee aadka u khafiifka ah wuxuu bixiyaa saameyn kuleylka kuleylka oo aad u fiican wuxuuna kor u qaadaa sare u qaadista kordhinta tusaalaha.
4.Cover si adag u xir tubbada si looga hortago faddarayn.
5.Badhigu wuxuu ku habboon yahay qalabka PCR-yada ugu badan.
6.Made waxaa laga sameeyay UPS Caaga Fasalka VI Polypropylene.
7. U dhigma heerka saxda ah ee saxda ah ee 96
8.Thin-derbiga kuleylka wanaagsan ee loo wareejiyo Waxaa lagu heli karaa midab hufan iyo mid cad, dabool fidsan iyo dabool dullin
Naqshadeynta naqshadeynta daboolka adag si looga hortago uumiga uumiga
10.Sertil si loo gaaro heerka SAL 10-6
MAYA. Sharaxaad Mugga Daboolka Sharaxaad Xirxirida Madhalays ka dhigida
PC1001 PCR Tube 0.2ml Flat ama Qubbad Hal 20000 / Ctns ikhtiyaari ah
PC0021 8-sifiican PCR strip 0.2ml Fidsan 8 Marinka 5000 / Ctns ikhtiyaari ah
PC0050 Tuubada Micro PCR 25ul Fidsan Hal 12000 / Ctns ikhtiyaari ah
PC0051 8-sifiican PCR strip 0.1ml Fidsan 8 Marinka 5000 / Ctns ikhtiyaari ah
PC0059 Tubada PCR 0.1ml Fidsan Hal 2500 / boorso ama 10000 / kiish ikhtiyaari ah
Hore: Tilmaamaha biibiile
Xiga: Saxanka PCR
PC0021 0.2ml 8 tubbada PCR
PC0051 0.1ml 8 tubbada PCR
PC1001 0.2ml PCR tubbada fidsan & qubbad
Qalabka fayriska 'Viral DNA / RNA Viral' (Safka)